"Wang Jiangnan" Central Plains Yunding, supermarket/Dong Feiyuan/Xudu Park/kufuphi nesikolo, uloliwe ohamba ngesantya esiphezulu, isibhedlele, iGemini flat ejongene nesitrato, isitayile saseNordic, uhambo olufanelekileyo. - I-Airbnb
"Wang Jiangnan" Central Plains Yunding, supermarket/Dong Feiyuan/Xudu Park/kufuphi nesikolo, uloliwe ohamba ngesantya esiphezulu, isibhedlele, iGemini flat ejongene nesitrato, isitayile saseNordic, uhambo olufanelekileyo.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu卉
Le ndlu ikwimpuma yendlela yeBayi kunye neWeiwen Road, iJunding Yinzuo Gemini kwisakhiwo seofisi yorhwebo, kwintshona yeKomiti yeQela likaMasipala kunye noRhulumente kaMasipala, i-Bureau yeRhafu yeSizwe, iSakhiwo seMobile, iCentral Plains Yunding Plaza, iRoyal Concubine Garden. , ngasempumalanga Xuchang College, kwisikhululo ngololiwe-high speed, the kuhlangana eBeijing-Hong Kong-Macao Expressway imalunga imizuzu 5 ngemoto. le indawo okuyo mkhulu kwanokuthuthwa ukulisebenzisa. kuyinto ezikufutshane Xudu Plaza Museum, I-East Lake Fountain Park Plaza, izithili zoshishino ezikufutshane, i-Central Plains Yunding Plaza, i-Wanda Plaza, i-360 Plaza, kunye nesitalato esikhethekileyo se-snack.
Apha, ishishini kunye nobomi yindalo kwaye izolile.
Isitayile seNordic silula kodwa asikho isitayile sokuhombisa esilula, sinebhedi enkulu ekhululekileyo kunye nomatrasi, ndiyakholelwa ukuba uya kulala kamnandi ebusuku! Ukongeza, kukho iikhabhathi zomoya zomoya, ezitofotofo kumaxesha amane ngokutshintshana kokufudumeza kunye nokupholisa, iTV yedijithali yeLCD, iimuvi, kunye nemidlalo inokutshintshwa ngokuthanda, i-100M yomfazi, i-hangers emgangathweni, iisofa eziphindwe kabini ezinegama elikhulu. zangasese nefudumeleyo, ezizimeleyo, icocekile kwaye kucocekile, zokuhlamba epheleleyo, Yiza ngok namava nto!
Eli gumbi likwindawo yoshishino kwisithili saseMpuma, kufutshane neKholeji yaseXuchang, iRoyal Concubine Garden, iXuchang Famous Supermarket, iWanda Plaza, i360 Plaza, iMyuziyam yaseXudu, kunye norhulumente kamasipala kumgama ohambahambayo. indawo eluhlaza mkhulu. Kukho ezaziwayo-kakuhle iivenkile Xuchang, iinkundla ukutya kunye kwiikhemesti iiyure ezingama-24 kwimizuzu. Vula ngasekhohlo ekuhlaleni ndiyihlanganise zonke iintlobo okulula eziziingangamsha, zokutyela Chinese, zokutyela asentshona, izindlu utywala, zokutyela ezinkulu nezincinane ngeempawu zabo nayo yonke into. Makhe uye ekhohlo👈ekunene👉
Umbuki zindwendwe ngu- 卉
Ukuzihlola ngokwakho, yongeza umninimzi ngexesha lokungena, kukulungele ukuthumela ulwazi lwegumbi kunye negama lokugqitha.